> Resource > Lugood > Sidee soo celinta iPhone ka Lugood
Maqaalkani waxa ujeedadiisu tahay in uu siiyo hage iyo xal dad doonaya in ay isticmaalaan Lugood si loo soo celiyo iPhone si ay u goobaha warshad, mobiilka iPhone ama dib bay u celin ka gurmad Lugood, ama aad rabtid inaad xaliso arrintan, ku xayiran Lugood diyaarinta iPhone loogu soo celiyo. Akhri si aad u hesho mid ka mid ah oo aad u.
Qeybta 1: Isticmaal Lugood soo celinta Your iPhone in Settings Factory
Qeybta 2: Lugood xayiran on Diyaarinta iPhone u soo celi?
Qeybta 3: Soo Celinta Your iPhone ka kaabta Lugood
Waxaad u baahan tahay si aad u hesho shaqada diyaariyo hoos ku qoran marka hore samayn haddii aad rabto in aad isticmaasho Lugood in la soo celiyo aad iPhone in goobaha warshad:
1. Download iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Lugood on your computer.
2. Xogta kaabta aad iPhone haddii aad leedahay xog muhiim ah oo ku saabsan waxa ay.
3. Disable Raadi My iPhone, iyo demi WiFi si looga hortago auto u hagaagsan ee iCloud.
Talaabooyinka in la soo celiyo aad iPhone in goobaha warshad
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer ka, ka dibna ay maamulaan Lugood.
Tallaabada 2. Marka aad iPhone waxaa aqoonsan Lugood, riix magaca qalab ee menu bidix.
Tallaabada 3. Hadda, waxaad ka arki kartaa fursad u ah "Soo Celinta iPhone ..." daaqada Kooban.
xayiran on diyaarinaya iPhone loogu soo celin Lugood? Waxa ay u muuqataa in ay tahay arrin caadi ah in dad badan oo markii ay cusboonaysiiso qalabka ay u macruufka cusub. Waxuu kuu sheegayaa in aad iPhone waa in hab-kabashada iyo aad weydiiyo in aan hadda soo celin, laakiin marka aad guurto, waxa ku xayiran kaliya ee "diyaarinaya iPhone loogu soo celiyo" saacado. Sida aynu u xallin kartaa arrintan? Iyo goorba Waxaa jirta waddo baxay.
1 click si ay u xaliyaan this "iPhone diyaarinaya soo celin" wax
Tan iyo Lugood ma kaa caawin kara inaad soo celiyo qalabka, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid kale oo la mid ah Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) . Waxaa heli kartaa iPhone ka mid ah hab-kabashada iyo ha Lugood waxaa lagu ogaan guul soo celiyo. Marka hore, soo bixi version maxkamad free hoos ku qoran.
Xir Lugood on your computer, ka dibna ay maamulaan barnaamijka. Marka iPhone waxa lagu ogaan karaa barnaamijka, waxaad arki doonaa suuqa kala sida ku cad xaq, isagoo sheegay in aad iPhone ma aha in hab caadi ah. Hadda, aad caadi ah dib u si fudud u heli karaan guji "Guuleysatey qalabka" button. Taasi waa ok.
Si aad kaga imaanayo Lugood soo celin iPhone, waxaa jira laba siyaabood. Waddada ugu caansan waxaa la isticmaalayo Lugood si loo soo celiyo gurmad ah oo gebi ahaanba si aad iPhone, halka dhanka kale waa eegista celin wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad oo aan Lugood. Aan hubi sida loo sameeyo hoose.
Ka Lugood gurmad gebi Soo Celinta iPhone
Haddii aadan haysan wax muhiim ah oo ku saabsan iPhone, sidan waa fursad weyn. Waxaad si aad iPhone soo celin karaa xogta gurmad oo dhan si buuxda.
Just xiriiriyaan iPhone in computer markii hore. Markaas ordi Lugood iyo riix magaca qalab ee menu bidix. Waxaad ka arki kartaa suuqa kala Summary ku soo bandhigeen oo ku saabsan xaq u. Raadi ee "Soo Celinta kaabta ..." button oo guji. Markaas dooran file gurmad aad rabto in la soo celiyo oo ay bilaabaan dib u soo celinta ee.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad xaq u riixi kartaa magaca qalab ee dhanka bidix iyo dooran "Soo Celinta kaabta ...". Waa si la mid ah sida aad u samaysaan si waafaqsan tallaabooyinka kor ku xusan.
Xulo soo celin iPhone kaga imaanayo Lugood aan la isticmaalayo Lugood
Haddii aadan rabin in ay lumiyaan xogta ku saabsan iPhone marka aad rabto in aad dib xogta laga gurmad Lugood ah u hesho, habka ay tahay waxa aad raadineyso weeyna. Iyadoo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) , waxaad ku eegaan karo iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad Lugood ee aan laga badinin wixii xog ah ee hadda jira ee aad iPhone. Just download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin a day hore.
Tallaabada 1. Dooro "kabsado Lugood ee kaabta File" dooro Lugood gurmad file in aad rabto in la soo celiyo. Markaas riix "Start Scan" badhanka si ay u helaan waxa ay soo bixiyay.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh saaro xogta iyo sax waxyaabaha aad rabto in aad soo kabsadaan ka mid ah.